Ny saina nohavaozina
"Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon 'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina" - Rôm. 12:2.
Ny anjaran'ny olona amin'ny fiasana ho famonjena ny fanahy dia ny mino an'i Jesosy Kristy amin'ny maha-Mpanavotra tonga lafatra Azy, tsy ho an'ny olona hafa, fa ho an'ny tenany. Tsy maintsy matoky, tia, matahotra an'Andriamanitry ny lanitra izy. Misy asa tsy maintsy atao. Tsy maintsy hafahana amin'ny herin'ny ota ny olona. Tsy maintsy tanteraka amin'ny asa tsara rehetra izy. Ny fankatoavana ny tenin'i Kristy no hany antoka ho azy fa miorina eo ambonin'ny fanorenana tsara ny tranony. Ny mandre sy milaza ary mitory teny kanefa tsy mankatia ireo tenin'i Kristy dia toy ny manorina trano eo ambony fasika.
Hahatanteraka toetra kristianina ireo izay mankato ny tenin'i Kristy, satria ny sitrapon'i Kristy no sitrapony. Koa velona ao anatiny i Kristy, Ilay fanantenan'ny voninahitra. Mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny amin'ny fitaratra izy ireo. Rehefa manao an'i Kristy ho antom-pisainana isika, dia Izy no manjary anton-dresaka; ary rehefa mibanjina Azy isika dia ho voaova hitovy endrika Aminy, avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, noho ny Fanahin'Andriamanitra. Ny olombelona, izany hoe ny olombelona lavo, dia azo ovana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny saina, ka afaka mamantatra ny "sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina." Fomba ahoana no hamantarany izany? Amin'ny alalan'ny fambaboan'ny Fanahy Masina ny saina, ny eritreritra, ny fo ary ny toetra. Aiza no miditra izany famantarana izany? "(...) Fa izahay dia natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona" - 1 Kor. 4:9.
Asan'ny Fanahy Masina ny asa marina eo amin'ny toetran'ny olona, ary hita maso ny vokatra, tahaka ny hazo tsara mitondra voa tsara, dia toy izany koa ny hazo izay nambolena teo amin'ny sahan'Andriamanitra, hitondra voa tsara ho fiainana mandrakizay. Ho resy ireo ota manimba; tsy mahazo laka ao an-tsaina ireo fisainana ratsy; voahaisotra ao amin'ny tempolin'ny fanahy ireo fahazaran-dratsy. Mizotra mankamin'ny tsara ny fironana nankamin'ny ratsy teo aloha. Voaongotra hatramin'ny fakany ireo fironana sy fahatsapana ratsy. Fihetsika masina sy fihetseham-po nohamasinina no voa omen'ny hazo kristianina. Fiovana tanteraka no miseho. Izany no asa ilaina tanterahina. - EDFC, tt. 8,9.